नेताज्यूहरु, जनता संग डर लागेन??? Mahabir Pun | Canadian Reporters
नेताज्यूहरु, जनता संग डर लागेन???
नेपालमा राजनीति गर्नेहरु मध्ये निकै जनालाई लाज न लाग्ने रहेछ अथवा लाज पचेको रहेछ भन्ने कुराको एउटा ताजा उदाहरण ६ जना उप प्रधानमन्त्रीहरु लाई लिन सकिन्छ. एउटा प्रधानमन्त्री लाई सघाउन दुइ जना सम्म उप प्रधानमन्त्री भए पुग्ने हो. तर अहिलेका यी उप प्रधानमन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नको लागी बनाईएको होइन. यिनीहरुलाई सो पदको अत्यन्तै लोभ लागेर र जबर्जस्ती जिद्दी गरेर उप प्रधानमन्त्री बनेका हुन्. यिनीहरुमा नैतिकता हुने हो भने यिनीहरु मध्यकाहरुले नै मुटुमा हात राखेर “जनताले के भन्लान त्यसैले मन्त्री मात्र खान्छु, उप प्रधानमन्त्री बन्दिन” भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो. सायद उपप्रधानमन्त्री भए पछि आगामी चुनाबमा धेरै भोट पाइन्छ कि भन्ने सोचेका होलान यिनीहरुले. ६ जना उप प्रधानमन्त्रीहरुलाई पालन राज्यले थुप्रै खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ. त्यसैले उप प्रधानमन्त्री बन्नेहरुको र बनाउनेको यो एकदम नाजायक निर्णय हो. लाटो मान्छेलाई पनि रिस उठ्यो.
लौ जा ——-
Mahabir Pun (from His facebook post)
======Latest Cabinet Reshuffle NEWS BELOW =====
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । तीन उपप्रधामन्त्री र चार मन्त्री थप्दै उनले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका हुन् ।यससँगै ओली सरकारमा छ उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदार, राप्रपा नेपालका कमल थापा र एमाओवादीका टोपबहादुर रायमाझी यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । १७ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् २८ सदस्यीय भएको छ ।
नवनियुक्त उपप्रधामन्त्रीत्रयले शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमक्ष पद तथा गोपनियताको समथ लिएका छन् ।
यस्तै बिहीबार नै चार मन्त्री थपिएका छन् । एमालेबाट अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्रीमा शेरधन राई, पर्यटनमन्त्रीमा आनन्द पोखरेल र श्रममन्त्रीमा शान्ता मानवी नियुक्त भएका छन् । रक्षासहितका सात मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन् । सातै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन् । चार मन्त्रीले भने विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सपथसँगै भएको मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहभागी सत्य नारायण मण्डल र रामकुमार सुब्बा विना विभागीय मन्त्री नै छन् ।